Xanuunka Dhabarka Hoose ee Joogtada ah: Daawaynta Xaqiiqda Dhabta ah ee Cusub ee Koowaad
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Xanuunka Dhabarka Hoose ee Joogtada ah: Daawaynta Xaqiiqda Dhabta ah ee Cusub ee Koowaad
AppliedVR, oo ah hormuudka horumarinta jiilka soo socda ee daaweynta immersive, ayaa maanta ku dhawaaqday in Maamulka Cuntada iyo Dawooyinka ee Maraykanka (FDA) ay siisay de novo ogolaanshadeeda calanka immersive therapeutic, EaseVRx, si loo daweeyo xanuunka dhabarka hoose ee daba-dheeraaday, kaas oo hore u helay qalab horumarsan. sanadka 2020. Warku waxa kale oo uu imanayaa cidhibtii AppliedVR oo ku dhawaaqaysa $36 milyan oo taxane ah maalgelinta B, taas oo wadarta maalgelinteeda ka dhigaysa $71 milyan.
EaseVRx waa qalab caafimaad oo la isticmaalo oo rijeeto leh oo leh agab software horay loo sii raray oo ku yaal goob qalabeedka gaarka ah kaas oo bixiya tababbarka maaraynta xanuunka ee ku salaysan xirfadaha habdhaqanka garashada iyo hababka kale ee habdhaqanka. Waxay isticmaashaa nidaamka dhabta ah ee dhabta ah (VR) kaas oo bixiya nuxurka VR iyada oo lagu darayo waxbarashada xanuunka nafsichosocial, tababarka neefsiga diaphragmatic, jimicsiga miyir-qabka, jimicsiga jawaab-celinta nasashada iyo ciyaaraha fulinta.
Mawduuca software-ka EaseVRx wuxuu ka kooban yahay siddeed toddobaad, barnaamijka VR-ku-saleysan ee dadka ka caawiya inay yareeyaan darnaanta calaamadaha iyo saameynta xanuunka. Dadka qaba xanuunka dhabarka hooseeya waxay raacaan kiliinikada la ansixiyay, barnaamijka caddaynta ku salaysan si ay u horumariyaan xirfadaha la qabsiga iyagoo sidoo kale abuuraya caadooyin cusub oo waxtar leh oo yareyn kara xoojinta xanuunka iyo faragelinta xanuunka.
"Oggolaanshaha FDA ee maanta waxay calaamad u tahay maalin qaali ah AppliedVR, qaybta daaweynta immersive iyo, ugu muhiimsan, dadka qaba xanuunka dhabarka hoose ee daba-dheeraada," ayuu yiri Matthew Stoudt, aasaasaha iyo maamulaha AppliedVR. "Xanuunka daba-dheeraada ee daba-dheeraada wuxuu noqon karaa mid daciifa iyo dhibaato qaali ah oo qaali ah, laakiin hadda waxaan nahay hal tallaabo oo ku dhow inaan gaarno hadafkeena ah inaan ka dhigno daweynta immersive heerka daryeelka xanuunka."
AppliedVR's FDA soo gudbinta waxaa taageeray laba tijaabo oo la kantaroolay (RCTs), qiimeynta waxtarka barnaamijka VR-ku-saleysan ee is-daweynta xanuunka joogtada ah ee guriga. Labada daraasadoodba waxay soo gabagabeeyeen in barnaamijka daaweynta VR ee is-maamulka ah, xirfadaha ku salaysan ma aha oo kaliya hab macquul ah oo la qiyaasi karo si loo daaweeyo xanuunka daba dheeraada, waxay sidoo kale waxtar u leedahay hagaajinta natiijooyinka xanuunka daba-dheeraada ee badan.
Daraasaddii ugu horreysay, oo lagu daabacay JMIR Formative Research, ayaa falanqeysay xogta dadka qaba xanuunka dhabarka hoose ee daba-dheeraaday ama fibromyalgia muddo 21-maalmood ah. Ka-qaybgalayaasha isticmaalaya EaseVRx waxay si weyn hoos ugu dhigeen shan tilmaame oo xanuunka muhiimka ah - mid kasta oo ka mid ah kuwaas oo la kulmay ama dhaafiyay 30-boqolkiiba heerka macnaha bukaan-socodka.
RCT-da muhiimka ah ee baranaya badbaadada iyo waxtarka EaseVRx muddo siddeed toddobaad ah, ka qaybgalayaasha kooxda EaseVRx celcelis ahaan waxay soo sheegeen horumarin la taaban karo oo ku saabsan daaweynta ka dib, oo ay ku jiraan 42% hoos u dhigista xanuunka; 49% hoos u dhaca faragelinta dhaqdhaqaaqa; 52% hoos u dhaca faragelinta hurdada; 56% hoos u dhaca faragelinta niyadda; iyo 57% hoos u dhaca faragelinta walaaca.
Ka-qaybgalka iyo xogta isticmaalka ayaa muhiim u ah bixiyeyaasha iyo bixiyayaasha kuwaas oo ay tahay inay qiimeeyaan suurtogalnimada in xubnaha / bukaan-socodka ay u isticmaali doonaan daawaynta dhijitaalka ah - gaar ahaan iyaga oo ka baxsan goobaha caafimaadka. Daraasadda muhiimka ah, ka qaybgalayaasha EaseVRx waxay muujiyeen ka-qaybgal sare oo celcelis ahaan dhammaystirka fadhiyada 5.4 usbuucii waxayna muujiyeen ku qanacsanaanta sahlanaanta isticmaalka Nidaamka Isticmaalka Miisaanka (qiimaynta qalabka si sahlan loo isticmaalo marka loo eego ATM-ka iyo adeegyada emailka sare).
"Waxaan u shaqeynay si aan daal lahayn dhowrkii sano ee la soo dhaafay si aan u dhisno cadeymo caafimaad oo aan isbarbardhigi karin oo muujinaya awoodda VR ee daaweynta xanuunka, oo aan aad ugu faraxsanahay inaan gaarno guushan muhiimka ah," ayuu yiri Josh Sackman, AppliedVR co- aasaasaha iyo madaxweynaha. "Laakin, howlgalkayagu kuma eka ogolaanshahan. Waxaa naga go'an inaan sii wadno cilmi-baarista oo ansixisa waxtarkayaga iyo waxtarkayaga kharashka daaweynta xanuunka daba-dheeraada iyo calaamado kale."
Xanuunka dhabarka hooseeya waa mid ka mid ah xaaladaha joogtada ah ee ugu badan ee dadku la kulmaan adduunka oo dhan waxayna u taagan yihiin mid ka mid ah sababaha ugu sarreeya ee ay dadku u seegaan shaqada. Intaa waxaa dheer, waa dhibaato aad qaali u ah caymisyada maadaama qaar badan ay u eegaan inay dhimaan kharashaadka la xiriira qalliinka dhabarka. Cilmi-baaristii ugu dambeysay waxay muujisay in, marka lagu daro qoorta xanuunka, xanuunka dhabarka hoose wuxuu ku kacayaa ku dhawaad ​​​​$ 77 bilyan caymiska gaarka ah, $ 45 bilyan caymiska dadweynaha, iyo $ 12 ee kharashka jeebka ka baxsan ee bukaanka.
Xanuunka daba-dheeraada, si ka sii ballaadhan, waa qaali wuxuuna gacan ka geystaa xasaradaha kale ee caafimaadka, oo uu ku jiro cudurka faafa ee opioid. Daraasad hore oo Johns Hopkins ah oo ku taal Joornaalka Xanuunka ayaa lagu ogaaday in xanuunka daba dheeraada uu ku kici karo ilaa $ 635 bilyan sannadkii - in ka badan kharashka sanadlaha ah ee kansarka, cudurrada wadnaha iyo sonkorowga oo la isku daray.
"Xanuunku inta badan waxaa lagu daaweeyaa hab biomedical oo keliya ah oo leh dhinacyada muhiimka ah ee xanuunka aan la daweyn," ayuu yiri Dr. Beth Darnall, lataliyaha sayniska ee AppliedVR iyo saynisyahan xanuunka Stanford. "Cilmi-baadhisteenu waxay muujinaysaa in VR ay cabbiri karto daryeelka xanuunka 'qofka dhan' ee waxtarka leh ee dadku si ku habboon ugu isticmaali karaan raaxada gurigooda. Maaddaama uu yahay hogaamiyaha qaybta daweynta immersive, AppliedVR hadda waxay u taagan tahay meesha ugu fiican si ay u wado isbeddel muuqaal ah oo ku wajahan daryeelka xanuunka la heli karo.
Ka dib ansixinteedii ugu horeysay ee FDA, AppliedVR waxay qorsheyneysaa inay sii wado tijaabinta si ay u muujiso waxtarka bukaan-socodka iyo kharashka-wax-ku-oolnimada isticmaalka VR si loo daaweeyo xanuunka, gaar ahaan dhamaystirka cilmi-baarisyo badan oo dhaqaale iyo natiijooyin (HEOR) oo leh bixiyeyaasha ganacsiga. AppliedVR waxa kale oo ay hadda wada shaqayn la leedahay Geisinger iyo Cleveland Clinic si ay u horumariso tijaabooyin caafimaad oo ay maalgeliso NIDA oo kala soocan kuwaas oo tijaabiya VR oo ah aalad badbaadinaysa opioid xanuunka ba'an iyo kuwa daba dheeraada.
AppliedVR waxaa horey u aaminay in ka badan 200 oo ka mid ah nidaamyada caafimaadka adduunka ugu horreeya. Tiknoolajiyada waxaa isticmaalay qiyaastii 60,000 bukaan ilaa taariikhda maareynta xanuunka iyo barnaamijyada fayoobida.